Ngaba izono zethu zinokuxolelwa? | Imibuzo YeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUruund IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Ngaba izono zethu zinokuxolelwa?
Akukho nzima ukwamkeleka kuThixo
IBhayibhile ithi sonke singaboni. Isono sasifumana kumntu wokuqala uAdam. Yiyo loo nto ngamanye amaxesha sisenza izinto ezimbi size sizisole ngazo. UNyana kaThixo uYesu Kristu wazifela izono zethu. Siyakwazi ukuxolelwa ngenxa yedini lakhe lentlawulelo, elisisipho esivela kuThixo.—Funda amaRoma 3:23, 24.
Abanye abantu baye benza izono ezinzulu kwaye bayazibuza ukuba ngaba uThixo unokubaxolela na. Okuvuyisayo kukuba, iLizwi likaThixo lithi, ‘igazi likaYesu uNyana wakhe lisihlambulula kuso sonke isono.’ (1 Yohane 1:7) UYehova uyabaxolela abantu abamone ngokunzulu, xa beguquka ngokunyanisekileyo.—Funda uIsaya 1:18.
Yintoni ekufuneka siyenze ukuze sixolelwe?
Ukuba sifuna uYehova uThixo asixolele, kufuneka sifunde ngaye—siziqonde iimfundiso zakhe, amacebiso kunye nezinto alindele ukuba sizenze. (Yohane 17:3) UYehova uyabaxolela abo baguqukayo kwizinto ezimbi abazenzayo.—Funda iZenzo 3:19.
Akukho nzima ukwamkeleka kuThixo. UYehova uyabuqonda ubuthathaka bethu. Uyaxolela kwaye unobubele. Ngaba indlela anobubele ngayo ayikwenzi ufune ukufunda ngakumbi ngaye uze wenze izinto azithandayo?—Funda iNdumiso 103:13, 14.